sanjen hydropower project(sanjen hydropower project) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
साञ्जेन र रसुवागढीको सेयर कारोबार सुरु
काठमाण्डौ । राष्ट्रिय महत्वका साञ्जेन र रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनीको सेयरको दोस्रो बजारमा मंगलबारदेखि कारोबार सुरु भएको छ । दुवै कम्पनीलाई नेप्सेले सोमबार कारोबार रेन्ज र संकेतसमेत तोकेको थियो । नेप्सेसँग दुवै कम्पनीले सोमबारै सेयर सूचिकरणसम्बन्धी सम्झौता समेत गरेका थिए। नेप्सेका अनुसार साञ्जेनले कारोबारका लागि SJCL संकेत पाएको छ...
साञ्जेन र रसुवागढीको सेयर सूचिकरणको सम्झौता, लाखौं लगानीकर्तालाई राहात
काठमाण्डौ । राष्ट्रिय महत्वका साञ्जेन र रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनीको सेयरको दोश्रोबजारमा भोलि(मंगलबार)देखि कारोबार हुने भएको छ । दोस्रो बजारमा कारोबारको तयारीमा रहेका दुवै कम्पनीलाई नेप्सेले कारोबार रेन्ज र संकेतसमेत तोकेको छ । नेप्सेसँग दुवै कम्पनीले सेयर सूचिकरण सम्बन्धी सम्झौता समेत सोमबार गरे । नेप्सेका अनुसार...
साञ्जेन र रसुवागढी हाइड्रोपावरको कारोबार रेन्ज र संकेत तोकियो, कसको के–कति ?
काठमाण्डौ । राष्ट्रिय महत्वका साञ्जेन र रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनीको सेयर कारोबार भोलि मंगलबारदेखि हुने भएको छ । दोस्रो बजारमा कारोबारको तयारीमा रहेका दुवै कम्पनीलाई नेप्सेले कारोबार रेन्ज र संकेतसमेत तोकेको छ । स्रोतका अनुसार साञ्जेनले कारोबारका लागि SJCL संकेत पाएको छ भने यसको प्रिओपनिङ कारोबारका लागि रु. ९६.३२ देखि २८८.९६ प्राइस...
साञ्जेन र रसुवागढीको सेयर आज सूचिकरण हुँदै
काठमाण्डौ । लामो समयको प्रतिक्षापछि साञ्जेन र रसुवागढी हाइड्रोपावरको सेयर दोश्रो बजारमा आज सोमबार सूचिकरण हुने भएको छ । राष्ट्रिय महत्वका यी दुई जलविद्युत कम्पनीको सेयर दोश्रो बजारमा सूचिकरणका लागि आज नेप्सेसँग सम्झौता हुने भएको हो । नेप्सेका प्रवक्ता मुराहरि पराजुलीले आज दिउँसो ३:३० बजे साञ्जेन र रसुवागढीको सेयर सूचिकरणको...
साञ्जेन र रसुवागढीको सेयर भोलि सूचिकरण हुँदै
काठमाण्डौ । लामो समयको प्रतिक्षापछि साञ्जेन र रसुवागढी हाइड्रोपावरको सेयर दोश्रो बजारमा सूचिकरण हुने भएको छ । राष्ट्रिय महत्वका यी दुई जलविद्युत कम्पनीको सेयर दोश्रो बजारमा सूचिकरणका लागि सोमबार(भोलि) नेप्सेसँग सम्झौता हुने भएको हो । नेप्सेका प्रवक्ता मुराहरि पराजुलीले सोमबार दिउँसो ३ः३० बजे साञ्जेन र रसुवागढीको सेयर सूचिकरणको...
टोखाको टोल विकास संस्थालाई मुक्तिनाथ बैंकको डस्टबिन सहयोग
काठमाण्डौ । मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमीटेडले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमअन्तरगत काठमाण्डौको टोखास्थित डाँफे टोल विकास संस्थालाई डस्टबीन हस्तान्तरण गरेको छ । टोखा–६, डाँफेबजार वरिपरीको सरसफाईमा ध्यान दिदै ंबैंकले डस्टबीन वितरण गरेको हो । उक्त डस्टबीन मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमीटेड टोखा शाखाका प्रमुख दिनेश पन्तले...
साञ्जेन र रसुवागढीको सेयर ढिलोमा साउन दोश्रो साताभित्र सूचिकरण हुने
काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड (नेप्से)मा साञ्जेन र रसुवागढी हाइड्रोपावरको सेयर सूचीकरण ढिलोमा साउन दोश्रो साताभित्र हुने भएको छ । आइपीओ बाँडफाँड भएको करिब अढाई महिना बितिसक्दा पनि यी दुई हाइड्रोपावरको सेयर नेप्सेमा सूचिकृत भएको छैन । नेप्सेमा सूचीकृत भई लगानीकर्ताहरुले खरिदबिक्री गर्न अब बढीमा १५ दिन...
पूँजीबजार: असारको सुस्त चाल कि बुलअघिको सन्नाटा ?
काठमाण्डौ । बजारमा असार मसान्तको प्रभाव देखिएको छ । असार मसान्तमा गर्नुपर्ने कर तथा ब्याजको जोहो, मौद्रिक नीतिको प्रतिक्षा र असार सकिएलगत्तै आउने सूचिकृत कम्पनीहरुको वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदनको प्रतिक्षा लगायतका कारणले बजारको सुस्त गति कायमै देखिएको हो । सुस्तमा चालमा हिँडिरहेको बजारमा कारोबार रकमतर्फको पहिरोले अझ बढी निराशा...
रसुवागढी र साञ्जेनको आइपीओ रिजल्ट, तपाईलाई कति पर्यो ?
काठमाण्डौ । रसुवागढी हाइड्रो पावर कम्पनी र साञ्जेन जलविद्युत आयोजनाको आइपीओ बाँडफाँड भएको छ । आइपीओ खरीदका लागि आवेदन दिएका सबैले सेयर पाएका छन् । बिहीबार उर्जा मन्त्रालयमा एक कार्यक्रम आयोजना गरी उर्जामन्त्री वर्षमान पुनको उपस्थितिमा आइपीओ बाँडफाँड गरिएको हो । दुवै कम्पनीको आइपीओ खरीदका लागि परेकामध्ये साढे २२ हजार बढी...
रसुवागढी र साञ्जेनमा परेका साढे २२ हजार आवेदन रद्ध !
काठमाण्डौ । रसुवागढी हाइड्रो पावर कम्पनी र साञ्जेन जलविद्युत आयोजनाको आइपीओ खरीदका लागि परेकामध्ये साढे २२ हजार बढी आवेदन रद्ध भएका छन् । प्रक्रिया नपुगेका, सञ्चयकोषका लागि निश्कासन गर्दा समेत सेयर भरेका, दोहोरिएका लगायतका कारण यति ठूलो संख्याका आवेदन रद्ध भएका हुन्। बिक्री प्रबन्धक सिद्धार्थ क्यापिटलकाअनुसार रसुवागढीको...
साञ्जेन र रसुवागढीको आइपीओ बिहीबार बाँडफाँड हुने !
काठमाण्डौ । साञ्जेन र रसुवागढीको आइपीओ आगामी बिहीबार बाँडफाँड हुने भएको छ । रसुवागढीको सेयर निश्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक सिद्धार्थ क्यापिटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ध्रुव तिमल्सिनाका अनुसार दुवै आयोजनाको आइपीओ एकैसाथ बिहीबार बाँडफाँड गर्ने तयारी गरिएको हो । अहिलेको तयारीमा कुनै व्यवधान आएन भने दुवै कम्पनीको आइपीओ बिहीबार...
काठमाण्डौ । साञ्जेन र रसुवागढीको आइपीओमा आवेदन दिने समय सकिएको छ । बिहीबार साँझ ५ बजेसम्म यी दुवै आयोजनामा मागभन्दा धेरै आवेदन परेका छन् । साञ्जेन जलविद्युत कम्पनीको आइपीओमा देशभरबाट ३ लाख ४ हजार ६९ जनाले १ करोड ४१ लाख ३२ हजार ८४० कित्ता खरीदका लागि आवेदन दिएका छन् । यो भनेको मागको तुलनामा २.८४ गुणाले बढी हो । साञ्जेन जलविद्युत...
चार कम्पनीको आइपीओमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन, कुनमा कति कित्ता भर्ने ?
काठमाण्डौ । आज(बिहीबार)देखि चारवटा कम्पनीको आइपीओमा आवेदन दिने समय सकिँदैछ । रसुवागढी र साञ्जेन जलविद्युत कम्पनी, गणपति माइक्रोफाइनान्उ र युनियन हाइड्रोको आइपीओमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन हो । आज ५ बजेभित्र इच्छुक लगानीकर्ताले यी ४ कम्पनीको आइपीओमा आवेदन दिन सक्नेछन् । अब हेरौं कुन कम्पनीको आइपीओमा बुधबारसम्म कति परेको छ आवेदन...
साञ्जेनको आइपीओमा ३ र रसुवागढीमा करिब २ गुणा बढी आवेदन, बिहीबारसम्म भर्न पाइने
काठमाण्डौ । साञ्जेन र रसुवागढीको आइपीओमा मागेभन्दा बढी आवेदन परेको छ । यी दुवै आयोजनाको आइपीओमा आवेदन दिन छिटो मितिमा २ दिन थप गरिएसँगै आवेदन पर्ने क्रम बढेको हो । बुधबार साँझ ५ बजेसम्म साञ्जेनको आइपीओमा करिब ३ गुणा र रसुवागढीको आइपीओमा करिब २ गुणा बढी आवेदन परेको छ । साञ्जेनको आइपीओमा आइपीओ निश्कासन भएको पाँचौ दिन बुधबार साँझ ५...